အချိုးအစားညီ ဦးချိုခွေများဖြင့် မွေးဖွားလာသော အာဖရိက တောဆိတ် Greater Kudu - ONE DAILY MEDIA
အာဖရိကဦးချိုတပ် တောဆိတ်များဟာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားပါတယ် ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ဒီလို အလားတူ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် တိရစ္ဆာန်တွေကို သင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အချိုးကျသော ခရုပတ်ဦးချိုများပါရှိသော အာဖရိက တောဆိတ် ကို သင်မြင်ဖူးပါသလား? Greater Kudu များ၏ ထူးထူးခြားခြား ဦးချိုများက ၎င်းတို့အတွက် ထိုနာမည်ကို တွင်စေခဲ့ပါတယ်။
လိမ်နေသောဦးချိုများက ဤတောဆိတ်၏ နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံး အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သူတို့ကို အစုအဝေးအုပ်ကြားမှာ အမြဲတမ်း ပေါ်လွင်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် နှစ်ပတ် ကနေ နှစ်ပတ်ခွဲခန့်ထိ လှည့်ပတ်၍ ဖြောင့်လျှင် ၄၇ လက်မအထိ ဆန့်နိုင်ပါတယ်။
Greater Kudus အထီးများသည် ၎င်းတို့အပိုင်နယ်မြေတွင် ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးရန် ၎င်းတို့၏ ဦးချိုများနှင့် ရံဖန်ရံခါ တိုက်ခိုက်ကြသည်ကို သင်သိပါသလား ??
ဤအာဖရိက တောဆိတ်များကို တောင်ဘက်နှင့် အရှေ့အာဖရိကတွင် အစုလိုက်တွေ့ရပါတယ်။ တောအုပ်များတွင် နေထိုင်ပြီး အညွန့်နှင့် အရွက်များကို စားသုံးခြင်းကို နှစ်သက်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် ဤမျိုးစိတ်များကို တောရိုင်းများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သေးသော်လည်း ဥပမာအားဖြင့် Kruger အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် ပို၍အတွေ့များပါတယ်
ဦးချိုလိမ်များနှင့်အတူ၊ ဤလှပသောသတ္တဝါသည် ၎င်း၏ဝမ်းဗိုက်တွင်ရှိသော အဖြူရောင်အစင်းကြောင်းများကြောင့် လူသိများပါတယ်။ ဤအစင်းကြောင်းများသည် ခြင်္သေ့များ၊ အာဖရိကခွေးများနှင့် hyenas များ၏အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်
Greater Kudu အထီးသည် ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် 700 အထိရှိပြီး ကြီးပြင်းလာသောအခါတွင် အရပ် 60 လက်မအထိရှိပါတယ်။
သူတို့သည် သူတို့၏ဘဝကို အမှီအခိုကင်းစွာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် မိတ်လိုက်ရာသီတွင် တစ်ကောင်တည်းနဲ့သာ ပူးပေါင်းကြပါတယ် ။
Greater Kudus အမများကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး သုံးကောင်မှ ဆယ်ကောင်အထိ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့မွေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ ထိုအဖော်များကို ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့နောက် မိခင်များသည် ၎င်းတို့၏ သားပေါက်များကို ဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန် 4-5 ပတ်ကြာ ချုံပုတ်ထဲတွင် ထားကြပြီး ကလေးတွေကို ကျွေးမွေးကြပါတယ်။
ထို့နောက် သားပေါက်များဟာ တောထဲတွင် မိခင်နှင့်အတူ အုပ်စုဖွဲ့ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် အသက်ခြောက်လအထိ မိခင်များ၏ စောင့်ရှောက်မှုကို ဆက်လက်ခံယူပြီး အဲဒီနောက်မှာတော့ သူတို့ဟာ အမှီအခိုကင်းစွာ နေထိုင်ကြပါတယ်။
သင် ဤလှပသော တောဆိတ်များ ကိုနှစ်သက်ပါက ဒီဆောင်းပါးကိုသင်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများထံ မျှဝေပေးလိုက်ပါ။